Ismaaciil Cumar Geele oo markii afaraad loo doortey Madaxweynaha Jabuuti – Radio Daljir
Abriil 9, 2016 7:26 b 0
Doorashadii ka dhacdeydalka Jabuuti maalintii Jimacada ayaa waxaa la shaaciyey in uu si rasmi ah ugu guuleystey Madaxweynaha muddada dheer xilka soo hayey ee Ismaaciil Cumar Geele.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Jabuuti ayaa sheegtey in Madaxweyne Geele ku guuleystey 86.6% codadkii la dhiibtey.
Doorashada waxaa ka qayb-qaatey dad gaaraya 133,356 oo qof, tiradan oo ah mid aad u yar marka la eego tirada dadka Jabuuti oo ka badan 700 000 oo qof, waxaana la aaminsan yahay in dad
Geele oo ah 68 jir ayaa Jabuuti ka soo talinaayey tan iyo sanadkii 1999, waana Madaxweynihii labaad ee Jabuuti yeelato tan iyo markii ay xornimada qaadatey, waxaa ka horeeyey Xasan Guuleed Abtidoon oo Abti u ahaa Madaxweyne Geele.
Sanadkii 2011 ayaa wax laga bedalay Dastuurka dalkaas, kadib Markii Madaxweyne Geele sheegay in oo mar saddexaad tartamayo, inkasta oo doorashadi ka dhigan tahay tii afaraad.
Jabuuti ayaa waxaa sidoo kale ku yaal Saldhigyada ugu waaweyn ee dalalka Maraykanka iyo Faransiiska ay ku leeyihiin Bada cas iyo Qaarada Afrika.